Accueil Momba anay
Ny Lalamasaka Hatry ny Ela dia vondrona Kristiana ao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara, mitory ny Filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny tanjon'ny Site dia ny hitaona fanahy maro ho amin'ny Famonjena ary ny hizara ny tenin'Andriamanitra sy fahatsapana amin'ny fanarahana ny Tompo Jesosy.
Izahay dia miara-miasa amin'ireo mpino kristiana, mpitandrina, ary mpitory teny ao amin'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy amin'ny famelomana ny Site. Koa miezaka izahay manangona torinteny sy fijoroana vavolombelona avy amin'izy ireo mba handraisantsika sakafom-panahy vaovao sy mitohy hatrany.
Ny Menu - Hijoro Vavolombelona dia sehatra natao ho an'ny rehetra ahafahatsika manome voninahitra an'i Jesosy Kristy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainanao; dia Famonjena, Fanasitranana, Fahagagana, Fiovam-po, Fitahiana... na izay fahatsapana tsara rehetra noraisinao tamin'ny Tompo.
Raha manana fijoroana vavolombelona manokana kosa ianao dia azonao atao ny manoratra aminay ao amin'ny Menu - Hifandray aminay mba ahafahanay mametraka izany eo amin'ny Fijoroana Vavolombelona.
Izahay ihany koa dia manana Studio de Production Multimedia, izay mamokatra CD Fijoroana Vavolombelona. Koa raha manana fijoroana Vavolombelona mafonja ianao, manambara Fahagagana na Famonjena, Fanasitranana, sns dia azonao atao ny manantona anay mivantana ahazoanay mandray feo anao. Jereo eo amin'ny Menu - Hifandray aminay.
Ny Lalamasaka Hatry ny Ela dia manao asa fanompoana maimaimpoana, ary ny mpiara-miasa rehetra dia Kristiana mpilatsaka an-tsitrapo. Koa raha hitanao fa mahasoa anao sy ny hafa ny Site dia raisinay am-pifaliana ny fanomezana avy aminao ho fiaraha-miasa aminay :
- Vavaka mandrakariva mba hananan'ny rehetra hery sy fahasalamana, ary hahita fahombiazana amin'izao asa fanompoana izao,
- Fitaovana, hahafahana manatsara ny fomba fiasa,
- Vola, hanohanana ireo fandaniana amin'ny fitoriana ny Filazantsara amin'ireo tsy mbola tonga amin'ny Famonjena, toy ny fizarana Baiboly, Fihirana, Trakta, Gazety ara-panahy, Boky ara-panahy...
- Na fanampiana hafa hitanao fa ilaina amin'ny asa fitorianteny
Koa azonao atao ny mifandray aminay mivantana eo amin'ny Menu - Hifandray aminay.
Ny Tompo anie ho amintsika tsirairay !
Amin'ny fonay rehetra !